ကျောက်ဆင်းတု ပြဿနာ	Posted on April 30, 2011	by mettayate အရှင် ဇ၀န ထံ စာဝါများလိုက်ဖူး၍ တပည့်လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော ဦးအာဒိစ္စ အမည်ရှိ ရဟန်းတစ်ပါးက –
“ဒါတင် မကပါဘူး။ မကောင်းတဲ့ ရှေးထုံးမှန်ရင် ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပယ်ရှားပစ်ရင် ဟုတ်တာ၊ ကောင်းတာချည်းပဲ။” “အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင် အရင်တုန်းက လင်သေလို့ မီးရှို့နေပြီဆိုရင် မယားက အဲဒီမီးပုံထဲ ခုန်ချပြီး သေရတယ်။ ကျန်မနေရစ်ရဘူး။ မိန်းမတွေကို လူရာမသွင်းဘဲ ကြဉ်ထားတာပေါ့။ တကယ်လို့ မီးပုံထဲ ခုန်မချဘဲ ကျန်ရစ်တဲ့ မိန်းမဆိုရင်လည်း နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးအားလုံး အပါအ၀င် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးက မိန်းမပျက်လို့ သဘောထားပြီး အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘဲ ၀ိုင်းကြဉ်လိုက်ကြတယ်။”
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ မှတ်ကျောက်. Bookmark the permalink.	← ဇမ္ဗုပတိချွတ်ခန်းပုံတော်